Ikhaya elimnandi Pinerolo
Igumbi lestudio elisondeleyo kwiziko lembali lasePinerolo. Isanda kulungiswa, kunye nokungena ngasese, imizuzu nje embalwa ukusuka kwisikhululo. Ibandakanya indawo eyahlulwe yaba yikhitshi kunye nendawo yokulala, kunye nebhedi yesiFrentshi. Utyetyiswe ngezinto zoyilo eziphucukileyo, ezinye zazo zithengiswa. Umthandazo omncinci womtshato odibanisa isitayile sangoku kunye nezinto zakudala kwintendelezo ezinokukunika uxolo kunye nokuphumla kodwa kufuneka uwele umgubasi ukuze uzifumane ukumbindi wesixeko obalulekileyo.
Indawo yokuhlala ixhotyiswe ngeTV, engatshaywayo. Ikhitshi esebenzayo kunye nesebenzayo, igcwele i-crockery kumxholo kunye nesitayela esibonisa indawo. Iindleko zibandakanya ilinen yokulala, iitawuli zasekhitshini, iitawuli kunye nebhafini. Ndiyathanda ukunyamekela iinkcukacha ukuze wenze ukuhlala kwakho kube yinkumbulo emnandi, ngenxa yale njongo uya kufumana ulwamkelo olumnandi olulindele ukuba ukonwabele lukhatshwa yiti emnandi okanye ikofu onokuthi uyilungiselele ngokwesiko lasekhaya laseNtaliyane. i moka. Kwigumbi lokuhlambela uya kufumana ibhasikidi encinci ene-shampoo encinci kunye neesepha zemifuno ye-Erbolario.
Indawo yokuhlala encinci ibekwe kumbindi wePinerolo, isitalato esikuyo yindawo yeZTL, ifikeleleke ngemoto kuphela ngemvume yokuhamba. Indawo yokupaka yasimahla okanye ehlawulelwayo ifumaneka kumgama nje ohamba imizuzu embalwa.
Ukujonga macala onke: xa usihla ngesitrato usiya embindini uya kuzifumana ukwindawo ekumbindi weskwere eneendawo zokunqula kunye nezakhiwo zembali. Ukuqhubekeka kumacala ohlukeneyo uya kufumana iiarcade ezineevenkile ezininzi ezineempawu, zombini ubugcisa kunye nokutya kunye nenkcubeko yewayini kunye neconfectionery eqhelekileyo edolophini nasePiedmont.
Sihlala kwisakhiwo esinye, siya kufumaneka ngoncedo, iingcebiso kunye neengcebiso. Ukuba usazise kwangaphambili, siya kukwazi ukwamkela kunye noncedo ngesiNgesi.